नेकपा एसबाट कहिले पाउने नयाँले मन्त्री ? प्रधानमन्त्री देउवाको मौनतामा , नेपालको शंका « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
नेकपा एसबाट कहिले पाउने नयाँले मन्त्री ? प्रधानमन्त्री देउवाको मौनतामा , नेपालको शंका
काठमाडौं, ८ असार । एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको आधा महिनाभन्दा बढी समय भैसक्दा पनि अझै मन्त्री हेरफेर भएको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको विवादलाई देखाएर मन्त्री हेरफेर रोकिएपनि अहिले भने केही मन्त्रीहरु नै प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल निर्वाचन घोषणा गर्न सुझाव दिइरहेका छन । एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सरकारमा पठाउँदा नै छ महिनाको भाका राखेको थियो ।
अहिलेका मन्त्रीहरुले ६ महिना कार्यकाल पूरा गरेपछि नयाँ मन्त्रीहरु पठाउने भने पनि ८ महिनापछि क्याविनेटमा नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने निर्णय पार्टीले गरेको थियो ।
तर पार्टीले पूराना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेलगत्तै मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्री पद जोगाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हारगुहार गरेका थिए ।त्यसपछि बजेट पारित नहुँदासम्मका लागि मन्त्रीहरुलाई यथावत राख्न पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री तथा प्रचण्डले सहमत गराएका थिए । तर अहिले भने एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीमात्रै होइन, जसपा र माओवादीका मन्त्रीहरु पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसदको बजेट अधिवेशनलगत्तै चुनावको मिति घोषणा गर्न दवाव दिइ रहेको बुझिएको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेबित्तिकै संसद भंग हुन्छ र निर्वाचनसम्म पुरानै मन्त्रीहरु काम गर्न पाउँछन् । एकीकृत समाजवादीका मन्त्री फेरिनेबित्तिकै ती पार्टीमा पनि मन्त्री हेरफेरको माग हुने भएकाले उनीहरुले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । मन्त्री फेर्नुपर्ने माग राख्ने र तत्काल निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्ने यी दुवै पक्षसँग निरन्तर छफफलमा रहेका देउवाले कस्तो कदम चाल्छन् ? त्यो भने अझै एकीन भैसकेको छैन । तर मन्त्री हेरफेरको विषयले पार्टीहरुमा भने विवाद बढाएको छ ।